Haddii aad doonayso in aad u soo guurto xaaskaada Finland deggan islamarkaasna aad tahay muwaadin u dhashay wadan aan ahayn Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub, waxaad u baahan tahay sharciga deganaanshaha.
Lamaanaha qofka dhalashada finnishka ah leh
Lamaanaha qofka ajnabiga ah
Wada socodka saxiibtinimada
Dalbashada sharciga degenaanshaha
Haddii lamaanaha loo diido sharciga degenaanashaha
Haddii aad isqabtaan muwaadin finnish ah, kaasoo degen Finland waxaad ku qaadan kartaa sharci degenaansho Finland ah oo ah middeynta qoyska. Sidoo kale lamaanaha isku jinsiga ah (lab ama dhedid isla ah) waxay sharciga degenaanshaha ku heli karaan lamaane ahaan, haddii aad ku jirtaan guur ama xiriir lamaane diiwaangashan.
Lamaanaha muwaadinka finnishka ah
Haddii lamaanaha aad guur laa'aan ku wada nooshihiin yahay muwaadin finnish ah, kaasoo ku nool Finland, waxaad heli kartaa sharciga degenaanshaha mideynta qoyska. Waxaana sharciga ku heli kartaa haddii:
aad isla nooleydeen lamanaahaga ugu yaraan labo sano ama
aad isku dhasheen ilmo (markaa leydin kama rabo inaad wada nooleydeen labo sano)
ama siinta sharcigu iney jirtey sabab kaloo jirtey darteed
Adiga iyo lamaanahaagu waa inuu caddeeyaa inaad wada nooleydeen labo sano, haddii aad ku dalbaneyso sidan sharci. Caddeynta waxay noqon kartaa caddeynta diiwaanka guriga (Talonkirjeote) ama heshiiska kirada guriga, taasooy ku caddahay xogta labadiina. Haddii adiga iyo lamaanahaaga kala degen tihiin labo dowladood, sharci degenaansho markaa leydin kuma siin karo tusaale haddaad wada nooleydeen keliya xiliyada fasaxa. Lamaanahaagu islama noolaan karaan lamaane kale.
Shardiga dhaqaalaha nolosha ee lamaanaha muwaadinka Finnishka ah
Haddii aad tahay xubin qoys ee muwaadin Finnish ah adiga lagaagama baahna dhaqaalaha nolosha ee dammaanad-qaadan. Waxaad heysataa xaqa shaqeynta oo aan xad laheyn. Shaqada waxaad billaabi kartaa marka lagu siiyo ogolaansha joogitaanka.
Macluumaadka la xiriira dalabka ruqsada waxaad ka heleysaa cinwaanka ah Dalbashada sharciga degenaanshaha.
Lamaanaha muwaadinka FinnishkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Lamaanaha guurka furan ee muwaadinka Finnishka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii lamaanahaagu yahay ajnabi, kaasoo heysta sharci degenaansho Finland, degena Finland wuxuu heli karaa sharci degenaansho middeynta qoyska ah. Sidoo kale lamaanahayaasha labka/dhediga isla ah way heli karaan sharciga degenaansha.
Lamaanaha wada daganaanshada kula nool qofka ajnabiga ah
Haddii lamaanaha aad wada nooshihiin uu heysto sharci degenaansho Finland ah degan yahayna Finland waad ku heli kartaa sharci degenaansho qoys ahaan. Sharciga waxaad ku heli kartaa haddii:
aad isla nooleydeen lamanaaha aad wada nooshihiin ugu yaraan labo sano ama
aad lamaanaha aad wada nooshihiin isku dhasheen ilmo (markaa leydin kama rabo inaad wada nooleydeen labo sano)
Adiga iyo lamaanaha aad wada nooshihiin waa inaad caddeysaan inaad wada nooleydeen labo sano, haddii aad ku dalbaneyso sidan sharci. Caddeynta waxay noqon kartaa caddeynta diiwaanka guriga (Talonkirjeote) ama heshiiska kirada guriga, taasooy ku caddahay labadiina magac. Haddii adiga iyo lamaanahaaga kala degen tihiin labo dowladood, sharci degenaansho markaa leydin kuma siin karo tusaale haddaad wada nooleydeen keliya xiliyada fasaxa. Adiga ama lamaanaha aad wadaganaanshada ku wadanooshihiin, qof kale guur kulama noolaan kartiin.
Shardiga dhaqaalaha ee lamaanaha muwaadinka ajnabiga ah
Si aad u hesho degenaansho Finland waxaa waajib ah in adiga ama lamaanahaagu ahaado mid heysta dakhli ku filan. Bogga Hoggaanka socdaalka ayaad ka xaqiiqsan kartaa caddada dakhliga leydinkaga baahan yahay.
Hadii guurkiinu uu dhacay markii lamaanahaagu uu yimid Finland kabacdi, waxaa ku saamaynaysa shuruuda ah dakhli ku filan inaad haysato.
Si kastoo ay ahaataba, xaalado la ogyahaya marka lagu jiro, waxaa shardiga dhaqaalaha nolosha lagu weecin karaa dhacdooyinka gaar ah marka ay lagu jiro, haddii ay jirto sabab gaar ah ama danta ilmuhu ay ku jirto.
Lamaanaha muwaadinka ajnabiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Lamaanaha guurka furan ee muwaadinka ajnabiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Dakhliga la iska doonayo in uu qofka soo galoLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii lamaanaha aad isqabtaan uu ogolaanshaha joogitaanka Finland ku helay sababo dhinaca megangelyada caalamiga ah islamarkaasna uu heysto derada qaxootinimada waxaad ogolaanshiyo joogitaanka Finland uga heli karo sababo qoys dartiis.
Lamaanaha wadanoolaashaha ee qaxootiga
Haddii lamaanaha aad isla nooshihiin uu ogolaanshaha joogitaanka Finland ku helay sababo dhinaca megangelyada caalamiga ah islamarkaasna uu heysto derada qaxootinimada waxaad ogolaanshiyo joogitaanka Finland uga heli karo sababo qoys dartiis. Haddii lamaanahaagu heysto sharci degenaansho Finland ah degan yahayna Finland waad ku heli kartaa sharci degenaansho qoys ahaan. Sharciga waxaad ku heli kartaa haddii:
Adiga iyo lamaanahaagu waa inaad caddeysaan inaad wada nooleydeen labo sano, haddii aad ku dalbaneyso sidan sharci. Caddeynta waxay noqon kartaa caddeynta diiwaanka guriga (Talonkirjeote) ama heshiiska kirada guriga, taasooy ku caddahay labadiina magac. Haddii adiga iyo lamaanahaaga kala degen tihiin labo dowladood, sharci degenaansho markaa leydin kuma siin karo tusaale haddaad wada nooleydeen keliya xiliyada fasaxa. Adiga ama lamaanaha aad wadaganaanshada ku wadanooshihiin, qof kale guur kulama noolaan kartiin.
Shardiga dhaqaalaha nolosha ee lamaanaha qaxootiga
Shardiga dhaqaalaha noloshu wuxuu idiinku dhacaa habab kala duwan, haddii lamaanahaagu uu ogolaansha joogitaanka ku helay sababo badbaadin caalami ah islamarkaasna uu derajada qaxootiga ku leeyahay Finland. Adiga shardi kuguma ahan kaalmo nololeed kugu filan:
Haddii uu lamaanahaadu uu helay megangelyo ama uu qaxooti qawiman ahaan u helay derajada qaxootiga kahor 1.7.2017 islamarkaasna aad qoyskiina dhisateen kahor inti uusan imaanin Finland.
Haddii uu lamaanahaadu helayo derajada qaxootiga wixi ka dambeysay 1.7.2016 waa in aad ogolaanshaha joogitaanka codsataa saddex bilood gudohood laga soo billaabo marka uu lamaanahaadu codsigiisa ka helay go’aan. Waqtiga cayiman ee saddexda bilood ah waxey xisaabintiisu ka billaabaneysaa maalinta uu lamaanahaadu helay ogeysiiska go’aanka.
Haddii aadan ka gaarin in aad ku codsato ogolaanshaha joogitaanka saddex bilood gudohood sababo aan adiga ku xirneyn dartood, waad codsan kartaa isu keenista qoyska. Waxaad sidoo kale ku sheegtaa codsigaada sababta aad saddexda bilood u dhaaftay.
Waqti dambe xittaa waad codsan kartaa isu keenista qoyska, laakiin waxaad adiga markaas ku quseynaya shuruudda dakhli kugu filan. Shardiga dhaqaalaha noloshunxittaa adinka wuu idin quseynayaa haddii guurkiinu uu dhacay marki uu lamaanahaadu Finland yimid.
Lamaanaha qofka helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Lamaanaha guurka furan ee qofka helay megangelyada caalamiga ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Shuruudaha dhaqaale ee nolol-maalmeedka xubinta qoyska qofka la siiyay megangelyo caalami ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Sharci degenaansho laguma heli karo calaqaadka ama xiriirka wada socodka. Sida waafqsan dastuurka Finland wada socdka labada ruux ma aha iney yihiin qoys.
Mararka qaar waa suurogal inaad sharci degenaansho ku meelgaar (B) ah ka hesho Finland xiriirka saxiibtinimo. Si laguugu ogolaado Finland waa inuu calaqaadkiinu yahay mid rasmi ah. Calaqaadka rasmiga wuxuu ahaan karaa tusaale mid aad dooneysaan inaad isku guursataan wadanka Finland.
Lamaanahaagu islama noolaan karaan lamaane kale.
Si aad u hesho degenaansho Finland waxaa waajiba ah in, aad heysato hanti kugu filan, hantidaasuna waa iney ahaato mid aad u madax bannaan tahay isticmaalkeeda, kuuguna jirtaa akoonkaaga. Laakiin saaxiibka jooga Finland lama qiimeynayo daqligiisa.
Saaxiibka wadasocoshada ee muwaadinka Finnishka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Shaciga ka soo codso wadankaaga ama wadanka kale oo aad markaas sida sharciga ah ugu nooshahay. Sharciga ugu horeeya waxaad sidoo kale ka dalban kartaa Finland dhexdeeda, haddii lammaanahaagu yahay muwaadin finnish ah adiguna aad tahay muwaadin u dhashay wadan aan fiiso looga baahnayn, tan macneheedu waa inaadan fiiso u baahnayn markii aad Finland imaaneysid.
Codeysiga waad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaarada Finland ee kuugu dhow, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo codsiga warqaaha asli ahaantooda. Waa inaad safaarada ku tagto sadex bilood gudohoon laga bilaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Xal ka gaarista sharcigaaga waxaa la bilaabayaa kadib, markaad u tagto safaarada ama barta adeegga. Caadi ahaan waa inaad safaarada ama barta adeegga horay waqti uga sii qabsato.
Xusuusnow inaad si joogto ah fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faah faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga.
Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga iyo lifaaqyadiisaba keeni kartaa safaarada Finland ee kuugu dhaw. Haddaad codsiga ku dalbaneyso foomka la buuxinayo, Foomka codsiga waxaad ka soo daabacan kartaa bogga shabakada Xaafiiska dal u soo guurista.
Ka baaraandegista codsiga ogolaanshiyuhu waa lacag. Lacagta waa in la bixiyaa marka aad keeneyso codsigaaga.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaUlkoasiainministeriö
Wakiillada Finland ee dibaddaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waqtiyda wax ka qabashada codsiyada duqsooyinkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Lamaanaha lama siinayo sharci degenaansho haddii sharuudaha helista sharciga degenaanshaha aysan buuxin. Ogolaanshaha waa loo diidi karaa lamaanaha xitaa, haddii mas'uuliyiinta Finland u arkaan, in ujeedada guurku ahaa sharci ku helis, oo aysan lamaanayaasha ujeedadeedu ahayn in ay nolo qoys kuwada noolaadaan. Mas`uuliyiinta dowladda way kaga shakin karaan in ujeedada guurkuba ahayd in sharci lagu helo, tusaale ahaan markii aad is guursaneyseen aad waqti gaaban istaqaaneen, ama farqi weyn u dhaxeeso da`diina ama lamaanayaasha midkood uu horay u soo maray guurar badan oo gaa gaaban. Haddii aad codsigaaga ka hesho diidmo, waxaad racfaan u qaadan kartaa maxkamadda-maamulka. Hagitaanada waxaad ka heleysaa lifaaqa go´aanka.
Dhibaatooyinka ogolaanshaha joogitaanka ka sii aqri bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka ogolaanshaha joogista .